ACHITLWINPYIN - Online Media
လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးသထက်ကြီးနေတဲ့ အတွဲရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ
ထိမိလိုက်ပါဘိ… ခုခေတ် အပျိုလေးတွေကို ရှယ်တွယ်ထားတာပါ..။ ဖတ်ကြည့်ပြီး ရှဲပေးနော်..။
ဒီလို ယောကျာ်း မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ရင်…!
အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန်တတ်သူတွေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပေါင်းဖက်သွားကြရတဲ့ စုံတွဲတွေဆိုပါစို့ ။
ACHITLWINPYIN November 20, 2017
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ Living Together ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလက်မထပ်ခင်အတူနေတာဘဲ အတူနေတယ်ဆိုတာ အိမ်တစ်အိမ်ထဲ တိုက်ခန်းတစ်ခုထဲ မနက်ကနေ ညအထိ တစ်နေ့တာလုံး နှစ်ယောက်သားအတူတူဖြတ်သန်းကြတာဘဲ အချိန်ကာလအားဖြင့်လည်းတစ်ပတ်နဲ့ တစ်ပတ်အထက်ပေါ့ သူတို့ရဲ့ Living Together ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ပြောရရင် သုံးနှစ်သုံးမိုး စောင့်ကြည့်တဲ့စနစ်နဲ့တူတူရယ်ပါ လက်မထပ်ခင်မှာ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမပြေ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ အဆင်ပြေမပြေ…
ကောင်းလိုက်တဲ့စာ. ခုခေတ် အပျိုလေးတွေကို ပြောထားတာ ပြန်လည်မျှဝေတာပါ (ဖတ်ကြည့် မှန်လွန်းလို့) ခေတ်ကိုက*ရှယ်သွားပေးပါဦး* အပျိုလေးတွေဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ Fb မှာ မပီကလာပီကလာ ဆဲနည်းမျိုးစုံဆဲမှခေတ်မှီတယ်ထင်နေကြတယ် အပျိုလေးတွေဖြစ်ရဲ့သားနဲ့fbမှာ၇ ဘဲနဲ့ပလူးပလဲပုံတွေတင်တာကိုထမင်းစားရေသောက်ဖြစ်နေကြတယ် အပျိုလေးတွေဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ ဘဲနဲ့hotelမှာအိပ်နေတဲ့ပုံတွေတင်ပြီးရှက်ကြော ပျက်နေကြတယ် အပျိုလေးတွေဖြစ်ပြီး မယူရသေးတဲ့ဘဲကို ယောကျာင်္းချင်းမွှန်နေအောင်ခေါ်ရတာကိုအရသာတွေ့ သူများအထင်သေးနိုင်တာကိုမေ့နေကြတယ်အပျိုလေးတွေဖြစ်ပြီး living…
►အနာဂတ် အစီအစဉ်တခုခု သင့်အတွက် ကြိုးစားနေပါလိမ့်မယ် . ►သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ ရှိနေခဲ့ရင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး သင့်ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးတတ်တယ် . ►အပိုငွေကုန်ပေါက်တွေ အပျော်အတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲတာတွေ လျော့ပြီး သင့်အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ဖြည့်စည်းပေးဖို့ အသုံးချတတ်ပါတယ် . ►သုံးနေကျ Password ဖွင့်ပြောပြတာမျိုး ရှိပါလိမ့်မယ် လျှိဝှက်ချက်…
အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန်တတ်သူတွေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပေါင်းဖက်သွားကြရတဲ့ စုံတွဲတွေဆိုပါစို့ ။ အီးပေနေတဲ့ဖိနပ်နဲ့ ဗွက်လူးနေတဲ့ခြေထောက်ပေါင်းဖက်ကြတယ်ပဲ မြင်မိတယ် ။ ဗွက်ပေခြေထောက်ကလည်း အီးပေတဲ့ဖိနပ်ကို ရွှေဖိနပ်ထင်နေမှာပဲ ။ အီးပေဖိနပ်ကလည်း ဗွက်ပေတာက သူ့လောက်မဆိုးတော့ ပနံသင့်တယ် ထင်ကြမှာပဲ ။ ဗွက်ပေခြေထောက်ကလည်း ဖေါက်ပြန်တတ်တဲ့ ဖေါက်ပြန်ဖူးတဲ့ အီးဖိနပ်ကို စီးနေရင်းနဲ့ ကျွတ်ကျသွားမှာကလည်း…
ပါးစပ်ထဲမှာအပူနာဖြစ်ခဲ့ရင် အိမ်မှာတင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး…
လျှာ၊ သွားဖုံးနဲ့ ပါးစောင် အတွင်းပိုင်းတွေမှာ အပူနာဖြစ် တာဟာ အန္တရာယ်မရှိပေမယ့် စကား ပြောရခက်၊ ပြုံးရယ်ရခက်၊ စားသောက်ရခက်နဲ့ အတော် လေး ခံရခက်ပါတယ်။ ဒီအခြေ အနေက နေသက်သာဖို့အိမ်မှာ တင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေး တွေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ -ရှားစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်နဲ့ အပူနာရှိတဲ့နေရာကို တစ်နေ့နှစ် ကြိမ်လိမ်းပေးနိုင်သလို…
လက်ချောင်းများကပြောသော သင်နှင့်သင်၏ ချစ်သူအကြောင်း
သင့်ချစ်သူအကြောင်းကို သိရှိချင်ရင် လက်ချောင်းလေးတွေကို စီစစ် ကြည့်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ချောင်းလေးတွေက ပြောတဲ့ သင့် ချစ်သူအကြောင်းကို သိနိုင်ဖို့ အောက်ပါအချက် (၃) ချက် အတိုင်း ဆန်းစစ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ၁။ လက်သူကြွယ်က လက်ညှိုးထက် ပိုမိုရှည်လျှင် အများအားဖြင့် လက်သူကြွယ်က လက်ညှိုးထက် ပိုမိုရှည်တဲ့…
#ရန်​ကုန်​ပြည်​သူ့​ဆေးရုံကြီး၊ပြင်​ပလူနာဌာန နံ​ဘေးက​ဆေးရုံ သန့်​စင်​ခန်းနဲ့အိမ်​သာရဲ့အဖြစ်​ဆိုးပါ၊နိုင်​ငံ​တော်​အစိုးရ၊ကျန်းမာ​ရေးဝန်ကြီး​ဌာနနဲ့​ဆေးရုံအုပ်​ကြီးတို့သိရှိ​စေဖို့နဲ့ လိုအပ်​တာ​တွေဖြည့်​ဆည်း​ပေးနိုင်​ဖို့ပါ။ #အိမ်​သာထဲက ကျားအ​ပေါ့သွား ​ကြွေအိုးပိတ်​ပြီးဆီး(​သေးရည်​)​တွေ လျှံထွက်​​နေပါတယ်​၊ကျားအိမ်​သာခန်း(၅)ခန်းရှိတဲ့အနက်​၊နှစ်​ခန်းက​သော့ခတ်​ထားတယ်​(ဘာ​ကြောင့်​ပါလိမ့်​),ကျန်​သုံးခန်းမှာ တခန်းကတံခါးပြုတ်​​နေပါတယ်​၊နှစ်​ခန်းကို လုတက်​​နေရပါတယ်​.. အခ​ကြေး​ငွေနဲ့​ပေးရလည်း​ ပေးလိုက်​ခြင်​ပါတယ်​၊ယခုလိုအထင်​ကရ ​ဆေးရုံကြီးမှာ…စီမံကိန်း​တွေ၊​ရေရှည်​ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်​ဒီ​လောက်​မူဝါဒချလုပ်​​နေတယ်​…ဆို​ပေမယ့်​ …​#ဆေးရုံမွမ်းမံပြင်​ဆင်​​နေတာနဲ့​ဆေး​ရုံအိမ်​သာက “မျက်​နှာမှာသနပ်​ခါး..​ပေါင်​မှာ​သေးစီး​ချောင်း”​နဲ့မိန်းက​လေးလိုဖြစ်​​နေတာမို့ အမြင်​မတင့်​တယ်​၊ကျန်းမာ​ရေးနဲ့မညီညွတ်​ဖြစ်​​နေပါ​​ကြောင်း..​တာဝန်​သိနိုင်​ငံသားတဦးအ​နေဖြင့်​တင်​ပြအပ်​ပါသည်​ခင်​ဗျား။ Credit – moe myint sheinn #ရနျ​ကုနျ​ပွညျ​သူ့​ဆေးရုံကွီး၊ပွငျ​ပလူနာဌာန နံ​ဘေးက​ဆေးရုံ သနျ့​စငျ​ခနျးနဲ့အိမျ​သာရဲ့အဖွဈ​ဆိုးပါ၊နိုငျ​ငံ​တျော​အစိုးရ၊ကနျြးမာ​ရေးဝနျကွီး​ဌာနနဲ့​ဆေးရုံအုပျ​ကွီးတို့သိရှိ​စဖေို့နဲ့ လိုအပျ​တာ​တှဖွေညျ့​ဆညျး​ပေးနိုငျ​ဖို့ပါ။…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သေတမ်းစာတဲ့…ဖတ်ပြီးမျက်ရည်တောင်ကျတယ်.. ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ကြ…….. (အလွန်လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ် အမေရယ်..ကြီးမြတ်လွန်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပါဘဲ) ချစ်မေမေဒေါ်စု ရဲ့သေတမ်းစာလေးကိုအားကြမိပါတယ်ခင်ဗျာ *ဘဝ ဟူသည်တိုတောင်း လှပေစွ. ကန်ရေပြင်၌ တက်သော ရေပွက်မျှသာ ဖြစ်တယ်။* *ကွေးသောလက်များ ဆန့် မသွားမီ မတည် သော အသက် ခန္ဓာ ဟူသည် ဇာတိ ဇရာ မရဏ…
မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ အချစ်ကိုရလိုလျှင် သူကြိုက်သောမုန့်ပုံမှန်ဝယ်ကျွေးပါ…
အမျိုးသား တစ်ဦး၏ နှလုံးသားသို့ သွားရာလမ်းမှာ အစာအိမ်မှ တစ်ဆင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုစကား ရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ နှလုံးသားကိုလည်း ယင်းလမ်းကြောင်း ဖြင့်သာ သွားနိုင်ကြောင်း သိလိုက်ရပြီ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဗိုက်ပြည့်နေမှ သာလျှင် ချစ်ရေးချစ်ရာကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စား တတ်ကြောင်း…
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် မြတ်ရွှေဂူဘုရားမှာ မြွေမင်းသား နဲ့ အတူ မြတ်စွာဘုရား ခြေတော်ရာတစ်ခုပေါ်လာ..
ACHITLWINPYIN November 19, 2017
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် မြတ်ရွှေဂူဘုရားမှာ မြွေမင်းသား နဲ့ အတူ မြတ်စွာဘုရား ခြေတော်ရာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် အာ့ ဒို့ #မြတ်ရွှေဂူဘုရား…
လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးသထက်ကြီးနေတဲ့ အတွဲရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ November 20, 2017
ထိမိလိုက်ပါဘိ… ခုခေတ် အပျိုလေးတွေကို ရှယ်တွယ်ထားတာပါ..။ ဖတ်ကြည့်ပြီး ရှဲပေးနော်..။ November 20, 2017
ဒီလို ယောကျာ်း မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ရင်…! November 20, 2017
အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန်တတ်သူတွေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပေါင်းဖက်သွားကြရတဲ့ စုံတွဲတွေဆိုပါစို့ ။ November 20, 2017
ပါးစပ်ထဲမှာအပူနာဖြစ်ခဲ့ရင် အိမ်မှာတင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး… November 20, 2017
Old Post Select Month November 2017 (93)
Love & Relationship 29
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ 8
ACHITLWINPYIN © 2018 - Designed By BfastMag Powered by WordPress